Indawo yeGolufa yeKhosi / yokulala ukuya kuthi ga kwi-6 / iZiqunjelwe
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlysha & Aaron
Wamkelekile eparadesi!! Ufumene indawo efanelekileyo yokuphumla. Indawo yethu ibekwe kumbindi weegadi ezigcinwe kakuhle zeTropiki, ngaphezulu kokujonga enye yee-estates zamachibi echibi. Omabini amadama ahamba kancinci kwiindawo, alungele abantwana abancinci. Indawo yethu iphumle kwaye ikhululekile, inazo zonke iimfuno ezisebenzayo ezilungiselelweyo kunye ne-air-conditioning kulo lonke. Lo mhlaba ubuyela kwiKhosi yeGalufa yaseCairns egcinwe kakuhle kwaye ikumgama oyi-5.9km kuphela ukuya eCairns City.
IApartment yethu ime kwindawo eshushu ye-4 yeenkwenkwezi zeTrinity Links Estate, kumgangatho wesibini phezu kokujonga enye yamachibi amakhulu echibi. Ezinendawo enamanzi athambileyo kwiindawo, iindawo ezinomthunzi, iindawo zokuhlambela ezishushu nezibandayo, iibhedi zemini/iindawo zokuhlambela zokuphumla ecaleni kwedama kunye neeshawari zangaphandle. Le ndawo ikwanenkundla yentenetya, imifuno emibini yokubeka eyenziweyo kunye neendawo ezimbini zeBbq enye yazo ilunge kakhulu kwigumbi lethu.
Ngendlu yethu siye sahamba kunye nehotele ecocekileyo (njengoko kubonwe kwimifanekiso yethu) kodwa songeza izinto ezimbalwa zasekhaya. Ke yiza nokutya kwakho kunye neziselo ukuze wenzele iholide efikelelekayo njengoko ixhotyiswe kakuhle kwiimfuno zakho zokupheka, ezantsi ukuya kwisikrufu se-cork. Sinebhari encinci ukwenzela wena (amaxabiso amaninzi angaphantsi kwexabiso leshelufa yevenkile enkulu).
Kwenziwe umzamo okhethekileyo ukukhusela oomatrasi bethu kunye nococeko lweendwendwe kunye nentuthuzelo ngezikhuseli zomandlalo ezivalwe ngokupheleleyo. Emva koko ifakwe ngelinen esemgangathweni yePolesy.
Ekufikeni kweendwendwe ziya kwamkelwa ngezandla ezishushu:
> Iti nekofu
> Isonka kunye nobisi (1litha yeefama zobisi)
> Ingobozi yeziqhamo zonyaka.
> I-BBQ kunye ne-tomato sauce
> 600ml ibhotile yamanzi undwendwe ngalunye
4.98 ·Izimvo eziyi-154
Umbuki zindwendwe ngu- Alysha & Aaron
Sifumaneka 24/7 kulo naluphi na uncedo olufunekayo, sikwafumaneka ekuhlaleni.
Ngokuqinisekileyo ndonwabile ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuthi ube nayo ingakumbi ekhokelela ekubeni uhlale njengoko oku kusinceda ukuba sikwazi ukuhlalisa/silungelelanise le ndlu ngokweemfuno zakho.
Ngokuqinisekileyo ndonwabile ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuthi ube nayo ingakumb…
UAlysha & Aaron yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- White Rock